Singapore: Kolikoly Manafintohina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Janoary 2012 3:58 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, বাংলা, Español, English
Nandritra ny taombavaovao Sinoa, nipoaka ny vaovao fa ny lehiben'ny Tafi-piarovana Sivily (SCDF) sy ny Foibe misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina (CNB) dia nanaovan'ny Birao Miady amin'ny Kolikoly (CPIB) fanadihadiana. Niteraka resabe momba ny kolikoly tao amina firenena voasokajy hatrany ho anisan'ny firenena iray manerantany manana taha ambany indrindra amin'ny resaka kolikoly izany.
Talen'ny CNB, Ng Boon Gay (sary ankavanana), dia nosamborina tamin'ny 19 Desambra, raha toa nosamborina tamin'ny 4 Janoary 2011 kosa ilay lehiben'ny SCDF, Peter Lim (sary ankavia). Nahazo fahafahana vonjimaika izy roalahy ireo ankehitriny, miandry fanadihadiana fanampiny. Ny kaomisera lefitry ny lehibe ao amin'ny polisy Ng Ser Song sy ny kaomisera lefitra Mpiaro ny Sivily Eric Yap no misolo azy ireo.
@skyline2527: Ny lehiben'ny #SCDF sy #CNB nahantona tamin'ny asany ary mbola atao fanadihadiana. Taona vaovao tokoa ho azy mirahalahy .#Singapore #SG
Mhatsikaritra kosa ny mpanara-maso ny Bodoy Singapore fa nanimba endrika ny governemanta mikasika ny fanamarinana ny fanomezana karama ambony izany vaovao izany:
@occupysg: Nanjary tsy misy antony tokony handoavan-karama betsaka mba hialana amin'ny kolikoly intsony. #SCDF #CNB
Voalaza fa nohadihadiana momba ny “hadisoana lehibe manokana” nataony izy roalahy ireo izay nahatafiditra vadina olona ao amin'ny mpanatanteraka ambony ao amin'ny IT tafiditra amin'ity raharaha ity ihany koa. Na dia izany aza, mbola tsy voafaritra ny mombamomba izany ramatoa izany, ary mbola somary mifanipaka ihany ny vaovao, araka ny hitan'i Gwee Li Sui tao amin'ny Facebook:
Ahoana ny fomba hanakambanana ny kaonty 联合晚报 sy The Straits Times:  Misy vehivavy 2 IT.  Raha nanambady teo amin'ny faha-30 taonany izy, somary kelikely, be fanetre-tena ary malefaka ilay ramatoa mpamatsy IT. Amin'izao faha-40 taonany izao kosa, nisaram-panambadiana izy ary falifaly, ny fanaovany kiraro avo no mahatonga azy somary lavalava rehefa jerena.  Mampisalasala ny iray na ireo kaonty roa ireo.
Mike Loh nandrisika ny manampahefana sy ny mpanao fanadihadiana mba hiara-hiasa amin'ny vahoaka, ka hamela ny rehetra hahafantatra izay tena zava-mitranga:
Fantatro izay holazain'i dada, “Fitsipika voalohany: Aza mihevitra ny olom-pirenena tahaka anao ho vendrana. Aza manao toy ny fitondran'ny mpandresy .”
Huh? Fitondran'ny mpandresy, inona no maharatsy an'izany?
“Oh,” mety hiteny i dada, “midika izany hoe ‘ataovy ao anaty aizina ry zareo dia vokiso dikin'omby.’”
Lucky Tan nanasongadina karazana kolikoly avolenta vao haingana, izay tsy mora ny manadihady sy mandamina izany ho toy ny kolikoly tsotra:
Amin'izao zava-miseho ankehitriny izao, toy ny tsy maharitra fakam-panahy amin'ny vehivavy ireo manam-pahefana ambony ireo ka nanokana toerana manokana mpamatsy IT mba hanodinana ny fandehan'ny varotra rehetra. Mety efa nitranga ny tranga mitovy amin'izao raha nisy ny fiarahan-dratsy niforona, ohatra, mety hisy fiantraikany eo amin'ny fanapaha-kevitra raisina ny fifanarahana mahazatra ataon'ny mpamatsy amin'ny manam-pahefana ambony. Amin'izao tranga ankehitriny izao, tsy mbola fantatra hoe iza izany mpamatsy izany fa rehefa mazava avokoa ny famotorana rehetra, hamarinina ny antonta-taratasy nandraisana azy raha olona ambony avy ao amin'ny governemanta no niara-niasa taminy matetika?
Ny gazety Gigamole nanontany ny amin'ny fahaleovantenan'ny CPIB amin'ny fanadihadiana ataony:
Ny fomba mahomby indrindra hanafoanana ny kolikoly dia ny fahaleovantenan'ny CPIB, mangarahara, sy mahomby amin'ny asa atao, eo koa ny vahoaka malina vonona hitsikera izay tsy mety . Hatramin'izao dia nahafa-po avokoa ny asa notontosain'ny CPIB, tsara tokoa izany. Saingy raha maniry ny mpanao politika eto aminay ho afaka amin'y kolikoly izahay, tokony hanana fahalalahana tanteraka ny CPIB amin'ny famotorana ataony amin'ireo manam-pahefana, anisan'izany ny minisitra ary indrindra ny Praiminisitra. Tsy tokony hanome vahana ho an'ny Praiministra ny tatitra avoakan'ny CPIB amin'ny fanatanterahana ity asa sarotra ity. Angamba tokony hodinihana indray izany resaka tatitra izany? Hatramin'izay nahazoantsika filoha voafidy izay, tokony atolotra ny Filoha indray ny tatitry ny CPIB, fa tsy any amin'ny Praiminisitra?
Na dia izany aza, tsy zavatra manafintohina manivaka tao Singapore vao haingana izany. Voalaza ihany koa fa i Yaw Shin Leong, mpikambana ao amin'ny antokon'ny “Mpiasa” mpanohitra , no manana olo-tiana ivelan'ny fanambadiana izay vehivavy ao amin'ny antoko Mpiasa ihany koa. Ny fotoana namoahana ny fanadihadiana dia mampihevitra fa niniana navoaka ny vaovao hanairana ny olona hitodika any amin'ny fanadihadiana ny resaka kolikoly.
21 ora izayKambodza